ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပ Cardiovax မြန်မာ, အသံုးျပဳနည္း, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်, အဘယ်မှာဝယ်ပါရန် – ြုမှုမှ ပုံမှန်သွေးဖိအား | My Fresh Gluten FREE
လေဖြတ်ခြင်းနှင့် တစ်ရှူးများ သေဆုံးသွားခြင်း ဘေးအန္တရာယ်ကို သုညအထိ လျော့ကျစေလျက် ရောဂါ၏အကြောင်းအရင်းကို ပစ်မှတ်ထားသည်။
ဘိုင်အိုဖလာဗိုနွိုက်ကြောင့် ပထမ ၆နာရီအတွင်း သွေးဖိအားကို ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေသည်။
၁ကြိမ် ကုသမှုအတွင်း သွေးကြောများ၏ အခြေအနေနှင့် ဆန့်ကျုံ့နိုင်မှုကို နဂိုအတိုင်းဖြစ်စေသည်။
သွေးဖိအားများခြင်း၏ အဆင့် ၁၊ ၂ နှင့် ၃ အတွင်း အသက်အရွယ်မရွေး ထိရောက်မှုအတွက် ဘေးကင်းစိတ်ချမှု
သင်သည် အောက်ပါတို့မှ အနည်းဆုံး လက္ခဏာရပ်တစ်ခု ခံစားနေရပါသလား။
မျက်စိအရှေ့တွင် အနက်ရောင် အစက်များ (မျက်စိထဲ အစက်အပျောက်မြင်နေခြင်း)
အာရုံနည်းခြင်း၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း၊ မူးဝေနေခြင်း
လက်ချောင်းများ ထုံ၍ အေးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သွေးဖိအားများသော လူနာများ၏ ၆၇% သည် နေထိုင်မကောင်းကြောင်း မသိရှိကြပါ။
သွေးဖိအားများခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အန္တရာယ်များသနည်း
သွေးဖိအား မြင့်ခြင်း၏ အကျိုးဆက်များသည် အဖုအကျိတ်ဆိုင်ရာ ရောဂါများနှင့် တီဘီရောဂါများထက် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ သွေးဖိအားများခြင်း ဖြစ်ရပ်များ၏ ၈၉% သည် တစ်ရှူးများ သေဆုံးခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ပါသည်။ သွေးကြောများအတွင်း သွေးခဲခြင်း ဖြစ်လာသည်။ ဦးနှောက်သွေးကြောမှ သွေးထွက်ခြင်း ဘေးအန္တရာယ်နှင့် လေဖြတ်ခြင်းများ မြင့်မားပါသည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ အထိုင်များသော နေထိုင်မှုပုံစံ၊ ဖိအားများနှင့် ကိုလက်စထရော အဆင့်မြင့်မားမှုများသည် အထူးသဖြင့် အန္တရာယ်များသော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ကြသည်။ အဝလွန်သူများသည် သာမန်လူများထက် ၃-၄ ဆပို၍ သွေးဖိအားများခြင်းကို ခံစားရပါသည်။
သွေးဖိအားများခြင်းသည် လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်ပြီး လူနာ ငါးဦးတွင် တစ်ဦးသည် သေစေလောက်သည့် ဘေးအန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်ရပါသည်။ ယခုပင် ကုသမှုကို စတင်ပြီး အပြည့်အဝ ကျန်းမာလာစေလိုက်ပါ။
အမျိုးသား သွေးကြောရောဂါကုသရေးစင်တာမှ မြန်မာသိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဤကာကွယ်ဆေးကုထုံးကို ရေးဆွဲရန် ၈နှစ် အချိန်ကြာခဲ့ပါသည်။
တွေ့ရှိချက်နှစ်ကို Gairdner ဖောင်ဒေးရှင်း နိုင်ငံတကာ ဆုချီးမြှင့်မှုအတွက် အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။
လိုအပ်သော လိုင်စင်များ အားလုံးနှင့်အတူ ပညာရှင်များကို ပံ့ပိုးပေးသော ဖြည့်စွက်ဆေး၏ ထိရောက်မှု၊ အရည်အသွေးမှီ ထောက်ခံချက်လက်မှတ်နှင့် အစိုးရ ပံ့ပိုးကူညီမှုတို့ကို အဆင့်ပေါင်းစုံ စမ်းသပ်မှုက သက်သေပြခဲ့ပါသည်။
Cardiovax သည် သွေးဖိအားများခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်း ၅ခု ကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
မတန်တဆများသော အာရုံကြောစနစ် (ဖိအား၊ အိပ်မပျော်ခြင်း စသဖြင့်): Cardiovax သည် ကန့်ပလူမြစ်နှင့် motherwort ပင်တို့ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် စိုးရိမ်သောကကို သက်သာစေပါသည်။
သွေးကြောများထဲရှိ အဆိပ်အတောက်များ: Cardiovax သည် နှလုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုးတက်စေပြီး ကော်ဖီစိမ်းနှင့် ဟော်သွန်းပင်မှ ရရှိသည့် ဘိုင်အိုဖလာဗိုနွိုက်ကြောင့် ပြုန်းတီးသွားသော သွေးကြောများကို သန့်စင်ပေးသည်။
သွေးပြန်ကြောနှင့် သွေးကြောများအတွင်း သွေးခဲခြင်း: Cardiovax သည် သွေးပြန်ကြော လည်ပတ်မှုကို တိုးတက်စေသည်၊ သွေးခဲခြင်းကို ပျက်စေပြီး ဟော့ (Humulus lupulus) ဟု ခေါ်သော ပန်းပုံကတော့ ပါဝင်သဖြင့် သွေးကြောနံရံများကို ခိုင်မာစေပါသည်။
သွေးသကြားအဆင့် မြင့်တက်ခြင်း: Cardiovax သည် အိုရီဂန်နမ်ပင်နှင့် မြင်းမြီးပင်တို့၏ အဆီအနှစ်များကြောင့် ဆီးချိုကို ကာကွယ်ပေးလျက် သွေးထဲရှိ သကြားပမာဏကို လျှော့ချပေးသည်။
အဝလွန်ခြင်း: Cardiovax သည် ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်၊ မီလီဆာ အဆီအနှစ်ကြောင့် ဇီဝဖြစ်စဉ်နှင့် ကျောက်ကပ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
သွေးဖိအားများခြင်းကို အဓိက တိုက်ခိုက်ပေးတာ ဘိုင်အိုဖလာဗိုနွိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူက လက်ဖက်စိမ်းနဲ့ ဟောသွန်းပင်ကနေသာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သူက သွေးဖိအားများတဲ့ ဆေးအားလုံးနီးပါးမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အများစုမှာ သူတို့ရဲ့ ပြင်းအားက မထင်ရှားပါဘူး။
ဒါကြောင့် ထိရောက်မှုရှိလာအောင် နှစ်အများကြီး စောင့်ရပါတယ်။ ဘိုင်အိုဖလာဗိုနွိုက် အများကြီးပါတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဆေးဝါးကတော့ Cardiovax ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။ သူ့ရဲ့ဖော်မြူလာနဲ့ အမှီအခိုကင်း ပညာရှင်တွေနဲ့ လေးစားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို ကျွန်တော် မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီပစ္စည်းကို လူနာတွေအတွက် အကြံပေးပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကုသမှု စတင်မလား ပြောပြပြီး «မိတ်ဆွေ အကြံဉာဏ်»၊ «အင်တာနက်တွင် ဖတ်ခြင်း»၊ «တီဗီတွင် ကြားခြင်း» တစ်ခုခုကို ရယူပါတယ်။
မှားပါတယ်။ ဘေးကင်းစိတ်ချတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့သာ သွေးဖိအားများခြင်းကို တိုက်ထုတ်သင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေ ယုံကြည်တဲ့ အရာတွေက ကိုယ့်ရောဂါကို တစ်သက်လုံး ပျောက်ကွယ်သွားစေပါမယ်။
ဦးလှသန်း, အဆင့်မြင့်အမျိုးအစား ဆရာဝန်၊ ဆေးပညာ Ph.D.
Cardiovax © ၏ ထိရောက်မှုကို လက်တွေ့ စမ်းသပ်ကုသမှုများဖြင့် သက်သေပြထားပါသည်။
လက်တွေ့ကုသမှု သဘောတူညီချက်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆေးရုံတစ်ရုံတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ပါဝင်ကူညီသူ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့က လက်တွေ့စမ်းသပ်ကုသမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၂၅ရက် ကြာမြင့်ခဲ့ပါသည်။
ပထမအဖွဲ့ – Cardiovax သောက်ခဲ့ပြီး သွေးဖိအား မြင့်မားသည့် အသက် ၂၈-၈၀ ရှိသော အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသားများ၊ ဒုတိယအုပ်စု – Placebo သောက်ခဲ့ပြီး အလားတူအခြေအနေ ရှိသည့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ
သွေးလွှတ်ကြောဖိအား၏ ပုံမှန်ဖြစ်စေခြင်း $-10000455]0f%
သွေးကြောများအတွင်း သွေးခဲခြင်းကို ဖယ်ရှားခြင်း $-10000455]0f%
နှလုံးခုန် မမှန်ခြင်းကို ဖယ်ရှားခြင်း $-10000455]0f%
Cardiovax © ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သဘောကျခဲ့သော လူများ၏ တုံ့ပြန်ချက်
AP လျော့ကျခြင်းဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ တစ်ရှူးတွေသေပြီး သွေးဝင်စီးဆင်းမှု နည်းခြင်းကြောင့် လေဖြတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျွန်မအစ်မ ဒီလိုဖြစ်တာကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မသိခဲ့တယ်။ ဆရာဝန်တွေက သူ့အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံးလုံးလျားလျားကြီးတော့ ပြန်မကောင်းသေးဘူး။ ကျွန်မလည်း ဒီရောဂါကြုံတဲ့အချိန်မှာ အချက်အနည်းငယ်ကို သတိပြုမိခဲ့တယ်။ အသီးအရွက်၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဆေးပစ္စည်းတွေကို ရှာကြည့်သင့်တယ်လို့ သိလိုက်တယ်။ အရမ်းထက်မြက်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဆရာဝန်အမျိုးသမီးက Cardiovax ကို ညွှန်းတယ်။ ကျွန်မ သူ့ကို သိပ်ကျေးဇူးတင်တာပဲ။ ၄နှစ်ရှိပြီ။ ကျွန်မ သွေးဖိအားမများတော့ဘူး။ လုံးဝကို ကျန်းမာတဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်သွားပြီ။ တစ်ရှူးတွေ သေမှာလည်း မကြောက်တော့ဘူး။ လေဖြတ်မှာလည်း မကြောက်တော့ဘူး။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ကြပါ။
ဒေါ်လှမြင့်၊ ၄၁နှစ်၊ ရန်ကုန်
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် အနည်းငယ်က ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှာ ကုသမှုခံယူခဲ့တယ်။ သွေးဖိအားများခြင်း ဆေးအသစ်အတွက် သုတေသန အဲဒီမှာ လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တခြားဘာများ လုပ်နိုင်ဦးမလဲ။ တခြားဆေးတွေလည်း ကျွန်တော့်ကို မကူညီပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် စမ်းကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲ။ ကံကောင်းချင်တော့ Placebo မဟုတ်ဘဲ Cardiovax သောက်တဲ့ အုပ်စုထဲမှာ ကျွန်တော် ပါခဲ့ရတယ်။ နှစ်နာရီကြာတော့ ကျွန်တော့်ဖိအားက ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်လာတယ်။ တဖြည်းဖြည်း ကျွန်တော် ပိုနေလို့ကောင်းလာတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဒီပစ္စည်းစမ်းသပ်မှုမှာ ပါဝင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ AP က အခုတော့ အမြဲတမ်း ကောင်းနေပါတယ်။
ဦးမြင့်စိုး၊ ၄၇နှစ်၊ တောင်ကြီး
ကျွန်မ ၅၁နှစ်ရှိပြီ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆေးခန်းမှာ ကျွန်မမှာ သွေးတိုးရှိတာ စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့တယ်။ နှလုံးခုန်တာ မူမမှန်ဘူး။ ဝေဒနာခံစားရပေမဲ့ ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၆လက လက္ခဏာရပ်တွေအားလုံးနဲ့ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်မ အသေးစားလေဖြတ်မှု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် ကျွန်မ ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သောက်ဖို့ ညွှန်းပေးထားတဲ့ ဆေးတွေ ချက်ချင်း မသောက်ခဲ့ဘူး။ ဓာတုပစ္စည်းတွေက အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ဒီလိုသိထားတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘာလုပ်ရမလဲ မသိခဲဘူး။ ကံကောင်းချင်တော့ ကျွန်မ မိတ်ဆွေဟောင်းတစ်ယောက်နဲ့ အမှတ်မထင် တွေ့တယ်။ သူက ကျွန်မကို Cardiovax အကြောင်း ပြောပြတယ်။ အခုတော့ ဘယ်အရာကမှ ကျွန်မကို ဒုက္ခမပေးတော့ဘူး။ ကျွန်မဖိအားလည်း ပုံမှန်ပဲ။ မြင်းတစ်ကောင်လို ကျန်းမာနေပါပြီ။
ဒေါ်စိန်စိန်၊ ၅၁နှစ်၊ နေပြည်တော်
Cardiovax အကျိုးကျေးဇူးများ ©
အမြန်ကူညီမှု: သောက်သုံးပြီး ပထမ ၆နာရီအတွင်း ဖိအား ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေပါသည်။
ရုတ်တရက် နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖိအားကျခြင်းကို မဖြစ်စေပါ: နှလုံး၏ တိကျသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထိန်းညှိပေးသည်။
ကျယ်ပြန့်သော ကျန်းမာရေး တိုးတက်မှု: ရင်ဘတ်နာခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးရောဂါကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်ခြင်း၊ လေဖြတ်ပြီးနောက် စကားပြောခြင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်း
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ မရှိသည့် ထိရောက်သော ရလဒ်: အပင်များ၏ ရှင်သန်ဆဲလ်များသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ ဆဲလ်များနှင့် အပြည့်အဝ ကိုက်ညီပါသည်။
အသုံးပြုရန် နည်းလမ်း –
အစာစားပြီးနောက် ၂တောင့် သောက်ပါ။ အမြင့်မားဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်အတွင်း ၃လ အသုံးပြုပါ။ အသေးစိတ် ညွှန်းကြားချက်များကို အထုပ်ထဲတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
သွေးကြောများကို သန့်စင်၍ အားကောင်းစေသည်။
နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ မြင့်တက်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။
အန္တရာယ်ရှိကြောင်းကို လူသန်းပေါင်းများစွာက မသိရှိကြပါ။
ဒီလက္ခဏာရပ်တွေထဲက အနည်းဆုံး တစ်ခုခု ရှိနေပါသလား။
ရာသီဥတု လှုံ့ဆော်မှုကို တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်း
မျက်လုံးအရှေ့ အစက်အပြောက်များ မြင်ရခြင်း
လက်နှင့် ခြေထောက်များ အေးစက်ခြင်း
​သွေးတိုးခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အန္တရာယ်ရှိသနည်း။
150သွေးတိုးခြင်းအဆင့် (သိမ်မွေ့): ပင်မလမ်းကြောင်း​သွေးဖိအားသည် ၁၅၀ mm Hg အထိ မြင့်တက်သည်။ အချို့လူများသည် လက္ခဏာရပ်တစ်ခုခု မခံစားရပါ။ ၎င်းသည် ပိုမိုပြင်းထန်သည့် ပြဿနာများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
၁၈၀-၂၀၀ သွေးတိုးခြင်းအဆင့် (အသင့်အတင့်): တည်ငြိမ်သော မြင့်မားသည့် သွေးဖိအား (၁၈၀-၂၀၀ mm Hg) လူတစ်ဦးသည် နှလုံးတွင် နာကျင်မှုခံစားရသည်။ ဘယ်ဘက်နှလုံးအောက်ခန်း လွန်ကဲစွာ ကြီးထွားခြင်းနှင့် သွေးလေဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
၂၀၀-၂၃၀ သွေးတိုးခြင်းအဆင့် (ပြင်းထန်): သွေးပင်မလမ်းကြောင်းသည် ပိုဆိုးရွားလာပြီး သွေးဖိအားသည် ၂၀၀-၂၃၀ mm Hg သို့ရောက်သည်။ သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ သေဆုံးနိုင်သည့် ဘေးအန္တရာယ် မြင့်မားသည်
Cardiovax အကျိုးကျေးဇူးများ – တန်ဖိုးအရှိဆုံးကို စောင့်ရှောက်ပါ။ !
မကြာခင် သွေးဖိအား တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်။
အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ကိုလက်စထရောအဆင့်ကို လျော့ကျစေသည်။
ပင်မလမ်းကြောင်း​သွေးဖိအား အတက်အကျဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ဆဲလ်အောက်စီဂျင် ချို့တဲ့ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
​သွေးကြော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
​ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့် နားထဲတွင် မြည်သံများကြားရခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေသည်။
မည်သို့ Cardiovax က အလုပ်လုပ်သနည်း။
ရက်သတ္တပတ်: ခန္ဓာကိုယ်တွင် သန့်စင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ပေးခြင်း၊ ပင်မလမ်းကြောင်း သွေးဖိအားကို လျှော့ချပေးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်းနှင့် အိပ်မပျော်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေသည်။
ရက်သတ္တပတ်: အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ ကိုလက်စထရော အလွှာ၏ သွေးကြောများကို သန့်စင်ပေးခြင်း၊ ဗီတာမင်နှင့် သေးငယ်သော ပစ္စည်းများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
ရက်သတ္တပတ်: အောက်စီဂျင်ပါသည့် သွေးများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ နှလုံးစည်းချက် တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက် မြှင့်တင်ပေးခြင်း
ရက်သတ္တပတ်: ပင်မလမ်းကြောင်း သွေးဖိအား တည်ငြိမ်ခြင်းနှင့် အတက်အကျဖြစ်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေသည်။ နှလုံးနှင့် သွေးခဲခြင်း၏ သွေးကြောများကို အကာအကွယ်ပေးသည်။
Cardiovax သည် အော်ဂဲနစ်အသစ် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဇီဝဓာတ်ကူပစ္စည်း Q10 နှလုံးဆဲလ်များ၏ ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ နှလုံးခုန်နှုန်းကို ပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။ နှလုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ ဘေးအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးသည်။ free radical များမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ အဆင့်မြင့်သည့် ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း၊ တစ်သျှူးများ ကြုံလှီခြင်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် အထောက်အကူပေးသည်။
Arjuna ထုတ်ယူမှု နှလုံးခုန်နှုန်းကို ပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။ သွေးကြောများကို ချဲ့ပေးပြီး ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းစေသည်။ သွေးအလွှာရှိ ကိုလက်စထရောအဆင့်ကို လျှော့ချပေးသည်။ အာရုံကြောစနစ်ကို တည်ငြိမ်စေပြီး အိပ်စက်ခြင်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ သွေးပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုကို တိုးတက်စေပြီး သွေးကျဲခြင်းနှင့် သွေးဖိအားလျော့ကျစေအောင် အထောက်အကူပေးသည်။
Moringa Oleifera ထုတ်ယူမှု အရည်ပိုများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ အဓိကနှင့် အရံအကြောများ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ နှလုံးကြွက်သား ဆန့်ကျုံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ သွေးပေါင်ကျခြင်း ဖြစ်စေသောကြောင့် နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်တွင် တင်းအားကို လျှော့ချပေးသည်။
·Lycopene သဘာဝ ဓာတ်တိုးပစ္စည်းဆန့်ကျင်ဆေး။ နှလုံးခုန်နှုန်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ သွေးလွှတ်ကြော ကျဉ်းခြင်းကို လျှော့ချပေးသည်။ သွေးခဲမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ကိုလက်စထရောအဆင့်ကို လျှော့ချပေးသည်။
Cardiovax ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ပံု – လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု ရလဒ်များ
ထုတ်ကုန်၏ ထိရောက်မှုကို လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သည်။ လုပ်အားပေးအုပ်စုက “Cardiovax” ကို ရက် ၃၀ ကြာ သောက်သုံးခဲ့သည်။
98% သွေးဖိအား ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်ခြင်း၊ အတက်အကျ မဖြစ်ခြင်း
91% နှလုံးလုပ်ဆောင်ချက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေခြင်း
72% ကိုလက်စထရော အဆင့်ကို လျှော့ချပေးခြင်း 88%
သွေးကြောများ အားကောင်းခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်း
99% ​ယေဘုယျ အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်မှု
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ထင်မြင်ချက် –
နှလုံးရောဂါများသည် သေစေသော ရောဂါများတွင် ထိပ်ဆုံးတွင် ရှိသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများသည် သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ၃၅နှစ်အောက် လူများအတွက် မှန်ကန်ပါသည်။ .
သွေးဖိအား နေ့စဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ ဆားနှင့် သကြား လျှော့၍စားသုံးရန်၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် အရက်သောက်သုံးခြင်းကို မပြုလုပ်ရန် အကြံပြုပါသည်။ Cardiovax ကို စတင်သောက်သုံးပါ။ ၎င်း၏ ထိရောက်မှုသည် ကိုလက်စထရော အလွှာ၏ သွေးကြောများ သန့်စင်ခြင်းနှင့် အချိန်တိုကာလအတွင်း ပင်မလမ်းကြောင်း သွေးဖိအားကို လျှော့ချပေးခြင်းတွင် အထောက်အကူပေးသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ တုံ့ပြန်မှုအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
Cardiovax နှင့် အခြားထုတ်ကုန်များအကြား အရေးကြီးသော ခြားနားချက်မှာ – ​သွေးအောက်စီဂျင် ပါဝင်မှုကို ပုံမှန်ဖြစ်စေပြီး သွေးကြောများအတွင်း သွေးခဲခြင်း ကာကွယ်ပေးသည်။ သွေးရည်တွင် သွေးလွှတ်ကြော ကျဉ်းခြင်းနှင့် အောက်စီဂျင် မရှိခြင်းတွင် သွေးဖိအားကို မြင့်တက်စေသည်။
ဖော်မြူလာတွင် တက်ကြွသော အစိတ်အပိုင်းများသည် အောက်စီဂျင်အဆင့် မြင့်မားခြင်းနှင့် တည်ငြိမ်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းပေးသဖြင့် သွေးကြောများ ကျဉ်းမြောင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းကို ပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။ .
ဦးထင်လတ်, နှလုံးဌာန၌ ဝါရင့်အထူးကုပညာရှင်
၁၀၈၊ ၇၆၈ Cardiovax ကို မှာယူပြီးသော လူများ – တကယ့္ရလဒ္အစစ္
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်က နာတာရှည် သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အမြဲတမ်း ဆေးတွေသောက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို အနားပေးရန် ပညာရှင်တစ်ဦးက ဒါကို သောက်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးခဲ့တယ်။ Cardiovax . သွေးဖိအား တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်။ ခေါင်းကိုက်တာနဲ့ နားထဲမှာ အသံမြည်တာတွေ မရှိတော့ဘူး။ အိပ်ချင်စိတ် ပျောက်တယ်။ အခုတော့ ကျုပ်ရဲ့သွေးဖိအားနဲ့ ကိုလက်စထရော အဆင့်ဟာ ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လို့ ဝမ်းသာနေရပြီ။ .
Cardiovax ​သောက်ပြီးနောက်ပိုင်း သွေးဖိအား တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်။ အဲဒီမတိုင်ခင် နှလုံးနဲ့ သွေးကြောအတွက် ဆေးဝါး ၃မျိုးသောက်ခဲ့တယ်။ နှလုံးခုန်မြန်တာကို သိပ်မကြာခင်က ခံစားလာရတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ မသိခဲ့ဘူး။ ဘယ်ဟာကမှလည်း အဆင်မပြေဘူး။ အခု ဆရာဝန်က သောက်ဆေးခွက်တွေကို လျှော့ပေးလိုက်ပြီ။ ညနေပိုင်းမှာ နှလုံးခုန်မြန်တာနဲ့ နားထဲမှာ အသံမြည်တာတွေ မရှိတော့ဘူး။ Cardiovax ကြောင့်ပေါ့။ ဒီဟာနဲ့ ကျွန်တော် ကျန်းမာလာတယ်။ .
ကျွန်တော် Cardiovax ဝယ်ခဲ့တယ်။ အထူးဈေးနဲ့ပေါ့။ အံ့ဩစရာတွေ ဖြစ်လာမယ် မထင်ခဲ့ဘူး။ နည်းနည်းလောက်ပဲ တိုးတက်လာမယ်မှတ်တာ။ တစ်ပတ်ကြာတော့ အိပ်မပျော်ဖြစ်တာတွေ မဖြစ်တော့တာ သတိပြုမိလာတယ်။ အသက်ရှုရတာ ပိုလွယ်လာပြီး သွေးဖိအား အတက်အကျဖြစ်တာတွေ မရှိတော့ဘူး။ ဆေးပတ်အပြည့် သောက်ပြီး အများကြီးနေလို့ ကောင်းလာတယ်။ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရလာတယ်။ ၁၂၀-၈၀ ငယ်ကတည်းက ဒီလိုမျိုး မကြုံခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါဟာ နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာစနစ် သန့်စင်လို့ ရလာတဲ့ ရလဒ်ပဲ။ ဒါကြောင့် သွေးကြော ပြဿနာရှိတဲ့ ဘယ်သူမဆိုကို အကြံပြုပါတယ်။
Cardiovax ဆေးတိုက် စြေး – ကျန်းမာတဲ့ နှလုံး ရရှိဖို့ မှန်ကန်တဲ့ အဆင့်တွေပါ။
1အဆင့်: အော်ဒါဖောင်ကို ဖြည့်ပါ။ ​အော်ပရေတာက ပြန်ဆက်သွယ်တဲ့အထိ စောင့်ပြီး အော်ဒါတင်ပါ။
2အဆင့်: အစာစားပြီး​ဆေးတောင့် ၂ တောင့်ကို ရေနဲ့သောက်ပါ။
3အဆင့်: မနက်နဲ့ ညနေပိုင်းမှာ Cardiovax ကို သောက်ပါ။ ရက် ၃၀ မပြည့်ခင်လောက်မှာ
Previous articleGluten Free Pork Chops with Peppers & Mushrooms
Next articleInsulab Việt nam, ai đã dùng, cách sử dụng, giá bán – viên nang cho bệnh tiểu đường